लोक कथा : पच्चीस पैसा - Safal Stories
Home Short Stories लोक कथा : पच्चीस पैसा
लोक कथा : पच्चीस पैसा
राधेश्यामले भगवानमा पूर्ण केन्द्रित भएर ध्यान गर्यो । उसको ध्यानले प्रसन्न भएर भगवानले सोध्नुभयो ,’ बालक ! तिम्रो ध्यानले म प्रसन्न भएँ । भन, के चाहन्छौ ‘।
आफ्नो अगाडी भगवानलाई देख्दा, केही छिन त उसलाई सपना जस्तै लाग्यो। आफैलाई चिमोट्यो । ‘साँच्चै ! विपना नै रहेछ ‘ । उसको हाउभाउ देखेर भगवान भने मुस्कुराइरहनुभएको थियो ।
राधेश्यामले भगवानलाई प्रश्न गर्यो ,’ मानिसहरुको हजार दिन बराबर, हजुरको कति दिन हुन्छ ?’
भगवानले उत्तर दिनुभयो ,’ एक दिन’।
राधेश्यामले फेरी सोध्यो ,’ एक करोड रुपैयाँ भनेको हजुरको लागि कति हो ?’
भगवानले जवाफ दिनुभयो , ‘ पच्चीस पैसा’ ।
त्यसपछि राध्येश्यामले भन्यो, ‘ भगवान ! मलाई हजुरबाट केवल पच्चीस पैसा भए पुग्छ’।
व्यवसायिक जीवन बाँच्ने र सफल हुने चाहना सबैको हुन्छ । तर, व्यवसायमा हात राख्ने मानिसमा राधेश्यामको जस्तै, यो कला हुनु आवश्यक छ। उसले, माग्यो पनि, आफूलाई राम्रो देखाउंदै निकै थोरै माग्यो। तर, उसको जीवनमा त्यो पच्चीस पैसा आयो भने ठूलो रकम बनेर आउन सक्छ । माग्नुभन्दा पहिले उसले त्यो पच्चीस पैसाको मूल्य तथा महत्व बुझ्यो ।
Previousनरेन्द्र मोदीका अनुसार यी हुन् सफलताका ५ सुत्र
Nextहराएको अस्तित्व : दुर्गा खनाल